Home Ulo oru Europe Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus na-abụghị eziokwu
Ebe E Si Nweta Data
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha ya "The Motorist". Ụmụaka Ụmụaka anyị nke Ụmụaka Akụkọ nke a na-akọkwa akụkọ na-adịghị mma Akụkọ gbasara akụkọ ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nchoputa ahu bu ihe ndi ozo na ndu ya, ndu ndi ozo, akuko nke ozo tutu ama aha, bilite na akuko akuko, nmekorita na ndu onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ike ya ngwa ngwa na azụ, ihe kpatara aha ya bụ "The Motorist". Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Nelson Semedo bụ nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus Na - Ndụ mbido
A mụrụ Nélson Cabral Semedo na 16th nke November 1993 maka ndị mụrụ ya na Lisbon, Portugal. N'ikwu okwu banyere mmalite ya, Semedo bụ ngwakọta nke ihe nketa nketa Cape Verde. Nke a na-akọwa ihe mere onye ọkpọsiri ike ahụ ji dị nso na onye agbata obi ya Cristiano Ronaldo ndị nwekwara Cape Verdean mgbọrọgwụ.
Nelson Semedo toro na nne ya a hụrụ n'anya, nna na-amaghị nwoke na nwanna nwoke dị na Mira-Sintra. Nne ya na-ese onyinyo ebe a kpọlitere ya n'ezinụlọ Katọlik.
Nne Mother Sem Sem. Ebe E Si Nweta Instagram
Nelson ebe ọ bụ nwata enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ na-echeta oge ya na nwanne ya nwoke nke okenye nyere, bụ onye họọrọ ịgbaso ụzọ nke ịjụ bọl na ịkụziri ndị nkụzi ya akwụkwọ.
Mira-Sintra, obodo nke Nelson Semedo bụ ebe na-anabata, obere obodo nwere ezinụlọ na PlayStation maka obi ụtọ. Maka Nelson, Ọ bụ ihe niile gbasara egwuregwu ịgba egwu egwuregwu FIFA nke ọ na-egwuri egwu. Ná mmalite tupu ọ dị afọ iri na ụma, Nelson nwere mgbagwoju anya na FIFA FC FC otu egwuregwu n'amaghị ọdịnihu ya ga-akpọrọ ya n'ebe ahụ n'ọdịnihu.
Ụmụaka Sem Sem na-echeta FIFA (Ebe E Si Nweta Namben / COD, Retos y Guias!)
Dị ka ụlọ ọrụ FC Barcelona si kwuo, Semedo nwere obi ụtọ mgbe nile ịhọrọ FC Barcelona na FIFA mgbe ọ na-egwu egwuregwu vidio na ndị enyi ya n'ihi na site na oge, ọbụna tupu ọganihu nke Messi, ọ na-eche mgbe nile "ha bu ndi kacha mma n'uwa."
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus Na - Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Ihe kpatara iji FC Barca na PlayStation FIFA Gaming Series bụ n'ihi otu aha "Ronaldinho". Onye na-agba afa nke na-egwuri egwu na FC Barcelona jupụtara n'ihu ihu nke usoro FIFA 2007 PlayStation 2 usoro ntanetị.
Nelson Semedo- Ihe Egwuregwu Ihe Egwuregwu Oge Mbụ (Ebe E Si Nweta GameSpot)
E wezụga ịbụ onye na-eri egwuregwu PlayStation, Nelson na-etinye onwe ya n'ahụ FC Barcelona T-Shirt dị ka n'oge ọ kpebiri ịmalite ịkụ egwu Street Football na ndị enyi na ebe ndị dị na mpaghara. N'oge ahụ, ọ bụ maka ịgba ọsọ n'okporo ámá.
Ọ dịtụbeghị mgbe m na-egwuri egwu maka otu ndị ọrụ gọọmentị. Agbalịrị m ugboro ole na ole mgbe m bụ nwata ma enweghị m ike ijikwa ya. Amalitere m ịkpọ egwu n'okporo ámá. kwuru, sị Nelson Semedo.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ụkwụ anyị maara taa achọpụtala ọrụ na nwata, Nelson Semedo dị iche. Ọ nọgidere na-egwu bọl n'okporo ámá ruo mgbe ọ bụ 15, afọ otu ndị ọrụ ụlọ ọrụ Sintrense hụrụ ya ma nwee mmasị na ike ya.
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus Na - Ndụ Ndụ Mmalite
Tupu a nwaa ya ọnwụnwa na Sintrense, otu ụlọ nwere ụkpụrụ a ma ama, Semedo amaburu na ọ dị obere iji mee ya. Mgbe o na-ele anya otua umuaka ndi ozo mere ya, o nwere ike igosi na ogo mmadu abughi ihe mgbochi ma oburu na etinye aka na ngwa na otutu ihe.
Mmasị Jimma maka bọọlụ na 2008 hụrụ ya ka ọ na-aga ule ya ma debanye aha ya n'akwụkwọ edemede nke ndị ntorobịa nọ na Sintrense, nke dị n'akụkụ mpaghara nke atọ nke Portugal n'oge ahụ.
Nelson Semedo na Sintrense. Ebe E Si Nweta Sentra Notícias.
Sintrense na-elekọta otu njikwa nyere Nelson Semedo ebe obibi na-enweghị nchegbu nke ọ chọrọ iji nwee ọganihu. Nelson Semedo malitere igwu egwu dị ka midfield nke na-enwe mmasị igwu egwu ihu na ihe mgbaru ọsọ.
Ọganihu Semedo na-eme ngwa ngwa na ndidi bụ ezigbo uwe ya. Inwe ntachi obi na mkpebi siri ike n'ime afọ 3 na-ahụ ya ka ọ na-agbawa elu karịa ya na-eto eto egwuregwu ma na-enwe ọganihu n'òtù ndị okenye. N'oge a, ndị isi Portuguese dị n'etiti ndị Benfica nwetara ọrụ ya.
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus Na - Ụzọ Ebube
E kenyere Nelson Semedo ka ọ bụrụ Benfica B mgbe ya sonyeere ọgbakọ. N'oge ụfọdụ, o mepụtara atụmatụ nke ịhapụ Benfica B maka obere ìgwè n'ihi na ọ naghị enwe ohere igwu egwu n'etiti ime obodo. Ọ bụ onye nchịkwa Semedo O Jogo onye kwesiri ime ka Semu kwue egwu.
"M jisiri ike mee ka o kwenye ka ya na Benfica nọrọ ma kpọọ dị ka ezi azụ. Agwara m ya okwu ma mee ka ọ ghọta ohere ọ nwere. Taa, a kwụghachiri ya ụgwọ maka mgbalị ọ tinyeworo. Jogo kwuru.
Mgbe ọ nwụsịrị ọrụ Benfica B, Semedo kwadoro ya na Centro Desportivo de Fátima. E weere ya na ọ mepere ngwa ngwa mgbe ọ laghachiri n'egwuregwu 29.
Mụ na Benfica bụ ndị otu ọkpụkpụ, Semedo maliteghachiri ọnọdụ ya ma bụrụ onye nke atọ a na-egwuri egwu na nchịkọta nke anọ nke akụkọ ha na nke ọ bụla. Nelson Semedo nyekwara ndị otu aka aka n'ịgụ Taça de Portugal, Taca de Liga na isi Liga.
Ụzọ nke Nelson Semedo Akụkọ (Ebe E Si Nweta Instagram)
Omume Nelson Semedo n'oge nile 2016-2017 mere ka ọ ghọọ onye na-eme ihe ngosi nke afọ 2017.
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus Na - Bilie na-ewu ewu
Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ, ọ ga-eme na football. Nelson Semedo nwere ike ọ gaghị abụ ihe kachasị mma na ụwa nke na-achọ ịgba egwu maka FC Barcelona. Mana mkpebi siri ike nwata ya na ọchịchọ ya kwụrụ ụgwọ na 13th ụbọchị July 2017 mgbe FC Barcelona mara ọkwa na ya na ụlọ ọrụ ahụ.
Ụbọchị Nelson Semedo bịanye aka na FC Barcelona. (Ebe E Si Nweta DailyStar)
Ị maara?... Andre Gomes emetụta ikike Semedo nwere ịmegharị na Camp Nou. O nyekwaara aka n'enyemaka obodo obodo ya.
Andre Gomes na Nelson Semedo. Ebe E Si Nweta Egwuregwu.
"Mụ na Andre na-ekwurịta banyere otú nnukwu ụlọ ahụ si bụrụ nnukwu, ikuku dị mma n'ime ụlọ mkpuchi na na ọ dị ka ezinụlọ" Semedo kpughere na ịbanye. "Enwere m mmasị na ihe ọ gwara m ma enwere m obi ụtọ ịnọ ebe a iji nweta ya."
Nelson Semedo ghọrọ 12th Portuguese ka ọ gaa na Catalan, na-ede aha ndị dị ka Figo, Deco na Vitor Baia. Kemgbe ọrụ ya dị oke egwu, e nyewo ya LPFP Primera Liga Breakthrough Player of the Year (2016-17) na n'etiti UEFA Champions League nke XI (2017).
O doro anya na Nelson Semedo gaara eche na afọ ole na ole gara aga, ndị na-agba ọsọ ndụ na 15 dịka ya ga-akwụsị na Barça. Ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus Na - Ndụ mmekọrịta
Ọlụlụ nke Nelson Semedo onye na - agbanahụ nyocha nke ọha mmadụ nanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya enweghị onwe ya. N'etiti ndị na-agba ọsọ Portuguese na-aga nke ọma, e nwere WAG mara mma na nwoke mara mma nke Marlene Alvarenga.
Nelson Semedo na Marlene Alvarenga (Ebe E Si Nweta Instagram)
Kama ịga maka otu nwanyị na-acha ọcha dị ka ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ojii, Nelson Semedo na-ahọrọ ịlụ onye ọ bụla sitere na ezinụlọ ya. O doro anya na Marlene bụ ihe atụ mara mma nke ụmụ nwanyị mara mma n'etiti WAGs FC Barcelona. Ọ na-akwado nwoke ya site na posts sitere na akaụntụ Instagram nke ya.
Marlene Alvarenga: A mara mma mgbakwunye na WAGs FC FC Barcelona. Ebe E Si Nweta OppaSportsBet.
Nelson Semedo taa ji obi ụtọ lụọ Marlene Alvarenga. Ka ọ dị ugbu a, a na-agọzi ma ndị nwere ịhụnanya na nwatakịrị aha ya bụ Luana Pereira Semedo nke a mụrụ na 9th nke May 2016.
Ezigbo Family Semedo. Ebe E Si Nweta Instagram
Di na nwunye na-eme ka ọha na eze dị ọnụ ma na-eletakarị ọnụ ego n'oge ezumike football.
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus Na - Ndụ nke Onye
Ndụ nke Onwe onye nke Nelson. Ebe E Si Nweta Instagram
Ịmata ụdị ndụ onwe onye nke Nelson ga-enyere gị aka ịhụ foto ya zuru ezu. O gosiputaworị onwe ya dị ka onye dị jụụ ma dị mma nke na-etinye ihe dị oké ọnụ ahịa ọ bụghị nanị nye ezinụlọ ya na ndị enyi ya.
"Nye m ha dị ezigbo mkpa, na-akparịta ụka n'etiti ndị enyi na ezinụlọ, ọ bụrụgodị na ọ bụ n'ụlọ, ọ bụ ihe m masịrị," Semima otu kwetara
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus Na - LifeStyle
Nelson Semedo bụ onye na-elekọta ndị nchịkwa nke yiri ka ha niile. O nwetara ego, ụlọ buru ibu na ụgbọ ala na-egbuke egbuke maka ụgwọ ọrụ ya dị oke egwu dịka ndị na-akwado egwuregwu.
Mkpụrụ ndụ nke Sem Semin. Ebe E Si Nweta SoccerInformania
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus Na - Ezinụlọ sitere
Semedo na-egosi na ọ bụ onye nwere mmekọrịta chiri anya na ezinụlọ ya na mgbọrọgwụ Cape Verde. Cape Verde abụghị mba bara ụba dị ka Portugal.
Obodo ahụ anaghị arụ ọrụ enyi n'ihi ụda ego. N'afọ ndị gafeworonụ, enwere ọpụpụ nke ndị si na Cape Verde. Otu n'ime ndị na-agba ọsọ dị otú ahụ bụ onye Manchester United na-akpọ Nani bụ onye a mụrụ na Praia (isi obodo Cape Verde) ma họrọ ịhọpụta Portugal. Ndị ọzọ na-ama ọkwa na Cape Verde mgbọrọgwụ gụnyere; Patrick Viera na Henrik Larsson.
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus Na - Eziokwu efu
Ị maara?… N'ịbụ onye bịanyere aka n'akwụkwọ maka FC Barcelona, ​​Semedo nwetara onwe ya na Neymar na-alụ ọgụ n'oge ọzụzụ na njem ha na United States. E jidere ihe omume na igwefoto. Ebe E Si Nweta DailyMail.
Ọ na-ewe ụbọchị ọnwa Nelson Semedo 5 maka ikwu banyere ihe ahụ mere na N'ajụjụ ọnụ na Maisfutrbol, ọ sịrị;
"Agha ahụ emeghị ka m laghachi azụ, ọ bụ ọnọdụ nkịtị na ọzụzụ. Enwere nkwado nke ndị otu na ndị enyi m. M ka bịarutere, otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mkpa n'òtù ahụ na-alụ ọgụ. Ọ na-ewute m n'oge ahụ mana m ghọtara na Neymar nọ n'oge siri ike n'oge ahụ. Ọ bụ oge ọ chọrọ ịhapụ ụlọ. "
Semedo nwere nọmba 50 na Benfica, nọmba nke a na-apụghị itinye na La Liga, nke na-enye ndị mbụ egwu egwuregwu aka itinye nọmba 1-25.
Ụdị nọmba nke Smith Sem Semin (Ebe E Si Nweta Ụlọ ahịa ọkpụkpọ Barcelona na BestWay4You)
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị bụ Nelson Semedo Child plus akụkọ banyere eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.